Welcome back Blogger Ko Nay Phone Latt | My Burmese Blog
Welcome back Blogger Ko Nay Phone Latt	On January 15, 2012	by Htoo Tay Zar	With	3 Comments	- Blogging, Personal	ဖားအံထောင်မှာ အနှစ် ၂၀ နဲ့ ၆ လကျော် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ ကိုနေဘုန်းလတ် ၁၃ ရက်နေ့ မလွှတ်ခင်ကတည်းက ၁၂ ညလောက် ကတည်းက နောက်ရက်လွတ်မယ်ဆိုပြီး သတင်းကြားနေခဲ့ရပါတယ်။ ပထမ အခေါက် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတုန်းက မပါခဲ့တော့ ဒီတစ်ခါလဲ မသေချာသလိုလိုဖြစ်နေပေမယ့် ၁၃ ရက်မနက်ပိုင်းမှာ ဖားအံထောင်က ထွက်လာပြီလို့ သတင်းဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ရောက်နေတဲ့ ကိုစိုးကြီးက သတင်းပေးလို့ သိခဲ့ရပါတယ်။
၁၃ ရက်နေ့မှာတော့ နေ့လည်လောက်မှာတော့ ကိုနေဘုန်းလတ်ပုံတွေ ကို သတင်းမှာစတွေ့နေရပါပြီ အဲဒီအချိန်က ကျွန်တော်က ဦးခင်ညွှန့်အိမ်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြန်လာ ဓာတ်ပုံပို့ခါစရှိသေးတယ်။ နောက်တော့ ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ မနီလာသိန်း၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဂျင်မီ စတဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို အလုပ်အရ စောင့်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်နေရလို့ တစ်နေကုန်ပါရော။ ကိုစစ်အိမ်နဲ့ မထိုက်တို့ ဖုန်းဆက်ပြီး ကိုနေဘုန်းလတ်ကို သူ့အိမ်မှာ ကြိုကြမယ် ညနေ ၆ နာရီပြောပေမယ့် ကျွန်တော့်မှာ လေဆိပ်မှာပဲ ရှိသေးလို့ လွတ်မလိုဖြစ်နေခဲ့သေးတယ်။ နောက်တော့ ကိုနေဘုန်းလတ်က ည ၁၀ နာရီ ခွဲလောက်မှာမှ ရောက်မယ်ဆိုတော့ ပုံအမြန်ပို့ပြီး သင်္ကန်းကျွန်းဘက်မှာ ရှိတဲ့ ကိုနေဘုန်းလတ်အိမ်ကို အရောက်ပြေးဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တော့လူက ၅ ရက်လောက် ကောင်းကောင်း မအိပ်ရနေ့ဘက် အိတ်အလေးကြီးလွယ်ပြီး ပြေးလွှားဓာတ်ပုံရိုက်ရနဲ့ တော်တော်ပင်ပန်းနေပြီ ဒါပေမယ့် ဟိုရောက်တော့ မဆုံတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ တွေနဲ့ ပြန်တွေ့ဖြစ်တယ်။ ကိုနေဘုန်းလတ် အိမ်မှာ ကိုဇော်ဇော်၊ မင်းယွန်းသစ်၊ ကိုညီလင်းဆတ်၊ ကိုမိုးလိှုင်ည၊ ကိုယောသား၊ ကိုထွန်းကျော်၊ ကိုဖိုးသူတော်။ မထိုက်၊ နန်းညီ၊ မပင့်ဂိုးတို့နဲ့ လူစုံနေကြပြီ နောက်တော့ ကျွန်တော်ရောက်ပြီး မကြာဘူး ကိုစိုးကြီး နဲ့ ကိုရဲအောင်သူ လဲရောက်လာတယ်။ ကိုနေဘုန်းလတ်ကတော့ ည ၁၁ နီးပါးလောက်မှ ရောက်လာပါတယ်။ လမ်းမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်နေလို့ နောက်ကျတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ရောက်ရောက်ခြင်းပဲ စီစဉ်ထားတဲ့ ကိတ်မုန့်နဲ့ မီးမှုတ်ပြီး ကိုနေဘုန်းလတ်က တစ်ယောက်ချင်းလိုက်ခွံကြွေးပါတယ်။ တစ်ယောက်စီကွျေးပြီး ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေပြောရင်း ကိုနေဘုန်းလတ် နားလို့ရအောင် ညသိပ်မနက်ခင်မှာပဲ အားလုံး ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုနေဘုန်းလတ်ကို အလက်ထရောနစ်ဥပဒေနဲ့ အမှန်တော့ ၂၀၀၇ သံဃာအရေးအခင်းမှာ ပါဝင်မှု့နဲ့ ထောင်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုနေဘုန်းလတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးစုပြီး အဲဒီ သံဃာအရေးအခင်း မတိုင်ခင်လေးတင် Myanmar Bloggers Society Seminar လုပ်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်နဲ့ နောက်ဆုံးကတော့ အရေးအခင်းအပြီး လောက်မှာ မြေနီကုန်းက ဓနုဖြူဒေါ်စောရီ ဆိုင်မှာ ထမင်းစားရင် service + သွားတုန်းက နောက်ဆုံးပါပဲ။ နောက်တော့ ကိုနေဘုန်းလတ် အဖမ်းခံရပြီဆိုတာ သိရတယ် အဲဒီအချိန်တုန်းက မမီတို့ရော မဘာညာတို့ရောပြောလို့ ကျွန်တော့် ဘလော့ဂ်ပေါ်မှာ တင်ထားခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်ဆင်မင်နာ တုန်းက အုပ်စုပုံလဲ အင်တာနက် ဖြတ်ထားတော့ ညဘက်မှာ dial up နဲ့ တက်တယ်ကြားလို့ ကျွန်တော့် ဆရာအိမ်သွားညအိပ်ပြီး ပုံတွေဖျက်လိုက်ရသေးတယ်။ ကိုနေဘုန်းလတ် ပုံကို နောက်တစ်ခေါက်ပြန်တွေ့တော့ စင်ကာပူက အလုပ်လုပ်တဲ့ ရုံး HQ မှာပါ။ Times မဂ္ဂဇင်းဧည့်ခန်းထဲတွေ့လို့ ကောက်ဖတ်ရင်းက ကိုနေဘုန်းလတ်ကို Times ကရွေးတဲ့ 100 list under Hero Categories မှာ ပုံတွေ့လိုက်ရတယ် အဲဒီတုန်းက မဂ္ဂဇင်းကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားသေးတယ် ခုတော့ မတွေ့တော့ဘူး ကိုနေဘုန်းလတ် နိုင်ငံခြားက ဂေါ်ဇီလာ ရုပ်ရှင် ကြော်ငြာရှေ့မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံပါလာတာတွေ့ရပါတယ်။ ကိုနေဘုန်းလတ် ထောင်ကျပြီး မကြာဘူး သတင်းကျွတ်မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ ဘလောဂ်ဂါ မောင်နှမတွေ အမှန်တော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေ မဟုတ်ပေမယ့် ကိုနေဘုန်းလတ်နဲ့ အားလုံးလွတ်အောင်ဆုတောင်းတဲ့ အနေနဲ့ အင်းလျားကန်ဘောင်မှာ Free Burma ဆိုတဲ့ စာရေးထားတဲ့ မီးပုံးတွေ ညဘက် သွားလွှတ်ကြပါသေးတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ကျွန်တော်တို့ အုပ်စုကို သိတတယ်လို့ ယူဆရတဲ့ ထောက်လှမ်းရေးတွေနဲ့ စကားပြောစက်တွေပါတဲ့ လူတွေပါ ကန်ဘောင်မှာ မီးပုံးလွတ်တာ လာကိုင်ပေးသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက မီးပုံးမှာ စာသားကြီးနဲ့လေ သူတို့လဲ တွေ့ပုံရတယ်နောက်တော့ အခြေအနေမဟန်တာနဲ့ အားလုံးစုပြီး MICT park ဘက်က လူရှင်းတဲ့ လမ်းဘက်သွားမယ်ဆိုပြီး သွားတာ ပြည်လမ်းကနေ လိှုင်တက္ကသိုလ်ထဲဝင်တဲ့ ရွှေဟံသာလမ်းထိပ်မှာ ကျွန်တော်တို့ အုပ်စုလမ်းလျောက်နေတာကို ကားလမ်းဘေးက taxi ထဲကနေ dslr ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ အုပ်စုကို လှမ်းရိုက်နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ အမှန်တော့ ကျွန်တော်က တစ်ယောက်ထဲနောက်မှာ ကျန်နေခဲ့တာ ကျန်တဲ့သူတွေက အရှေ့မှာ လမ်းလျောက်သွားနေကြတော့ ကျွန်တော့်ကို သူတို့ သတိမထားမိလိုက်ဘူးထင်တယ်။ ကျွန်တော်တွေ့တွေ့ချင်းမှာ စက္ကန့်ပို်င်းလောက် လူတစ်ကိုလုံးရပ်သွားပြီး ကြောင်သွားတယ်။ နောက်တော့ သူတို့ဆီပဲပြေးလိုက်သွားလိုက်တယ် ကြောက်မှာစိုးလို့ ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှ မပြောခဲ့လိုက်ဘူး။ နောက်တော့ ကျွန်တော်တို့ လိှုင်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကနေ ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ အမှန်တော့ အမှတ်တရတွေပါပဲ နိုင်ငံရေးသမားလဲ မဟုတ် အတိုက်အခံလဲ မဟုတ်ပဲနဲ့ အဲဒီနှစ်တွေမှာ ဘလော့ဂ် ရယ် ဘလော့ဂ်ဂါ ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေက သူပုန်လိုဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ဆီကို ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ သူတွေလာတွေ့ပြီး ဘလော့ဂ်လောက အကြောင်းစုံစမ်းတာမျိုးရှိခဲ့တယ် နောက် အတိုက်အခံဘလော့ဂ်တွေ ဘယ်သူတွေလဲ မေးတာမျိုးရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်လဲ အမှန်အတိုင်းပဲဖြေခဲ့တာပဲ ကျွန်တော်နဲ့ တစ်ယောက်မှမသိဘူးနောက် သူတို့က နိုင်ငံခြားကနေ နာမည်ပြောင် nick name တွေနဲ့ ရေးနေတော့ စုံစမ်းဖို့ မလွယ်ပါဘူးလို့ပဲ ဖြေခဲ့သေးတယ်။ ဆိုးချက်က ဘလော့ဂ် ဆီမင်နာတွေ ၂၀၀၇ နောက်ပိုင်းလုပ်ခွင့်မရဘူး ဘလော့ဂ်နာမည် စာနယ်ဇင်းမှာ ပါခွင့်မရခဲ့ဘူး။ ဆီမင်နာဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်အဖွဲ့ဖာသာ ခေါင်းခံပြီး ကြိုးစားကြတာတောင် MCPA လို ကွန်ပျူတာ အသင်းတွေက ကန့်ကွက်လို့ အခန်းတောင် ငှားခွင့်မရခဲ့ဘူး။ အခုတော့လဲ အားလုံးပြောင်းလဲသွားပါပြီ။ ဘလောဂ်ဟာ citizen journalist တွေ မွေးထုတ်ပေးတဲ့ နေရာတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဘလော့ဂ်တွေ ပြန်ဖွင့်ပေးပြီး ကိုနေဘုန်းလတ် ကိုလဲ လွှတ်ပေးလို့ ဝမ်းသာရပါတယ်။ ကိုနေဘုန်းလတ် အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတာကို အမှတ်တရအဖြစ် ဗီဒီယို ရိုက်ပြီး တင်လိုက်ပါတယ်။ နောင်တစ်ချိန် အထိ အမှတ်တရ ဖြစ်စရာအနေနဲ့ ကျန်ခဲ့မှာပါ။ အားလုံးပဲ ကျေးဇူးပါ…. Update ~ Photos of Ko Nay Phone Latt as he is leaving Pha An Prison on 13 January 2012 on LA Times newspaper frontpage. Photo by Ko Nyein Chan Naing/EPA
Blog, Blogging, Personal	3 Comments	မဗေဒါ
ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ပါ လိုက်ပျော်နေလို့… ပါးးစပ်ကြီးကို ဖြီးနေတယ်…
Like or Dislike: 1 0	မစိုးရိမျ
သာဓု, သာဓု, သာဓုပါဗျာ/ လူတစ်ယောက်က လူတစ်ယောက်ကို လေးစားကြပုံခြင်းတော့ တူမှာ မဟုတ်ဘူး။ တစ်ယေက်ကို နည်းပညာပိုင်းမှာ လေးစားသလို၊ နောက်တစ်ကို စိတ်ဓာတ်မှာ လေးစားရပြန်ရော။ ဒီတော့ ကိုယ်သိတဲ့ လူတော်တွေအကြောင်း များများရေးဗျာ/ လာဖတ်တဲ့ လူငယ်တွေ လေးစားစိတ် အားကျစိတ်တွေ ဖြစ်ရအောင်ပေါ့။
Well-loved. Like or Dislike:20	Black Dream
Welcome back Ko Nay Phone Latt..